Malaia garnet, ukusuka eKenya / i-pyralspite kunye ne-calcium / iVidiyo encinane
Malaia garnet, evela eKenya
I-Malaia garnet okanye i-Malaya garnet yigama le-varietal igama le-gemological elikhanyayo kumnyama omnyama obomvu, i-orange ebomvu, okanye i-orange garnet ephuzi, engumxube ngaphakathi kwee-pyrope series, i-almandine, ne-spessartine ene-calcium encinane. Igama elithi Malaia liguqulelwa ukusuka kwisiSwahili ukuba lithetha, "ongenalo intsapho". Itholakala empuma ye-Afrika, kwi-Umba Valley emngceleni weTanzania neKenya.
Iintlobo ze-Garnet zifumaneka kwimbala emininzi ebandakanya obomvu, i-orange, ephuzi, eluhlaza, obomvu, obomdaka, obomvu, obomnyama, obomvu, ongenangqombela, obunomthunzi obomvu kakhulu.
Isampula esibonisa umbala obomvu garnet unokubonisa.
Iintlobo ze-Garnet 'iimpawu zokudlulisa ukukhanya eziqhelekileyo zingahamba ukusuka kwiimpawu ezibonakalayo ezibonakalayo ezibonakalisiweyo kwiintlobo ze-opaque ezisetyenziselwa iinjongo zoshishino njengeebrasives. Ukukhazimula kwamaminerali kubandakanywa njenge-vitreous (i-glass-like) okanye i-resinous (i-amber-like).
Iigarnets zi-nesosilicates ezinefomula jikelele X3Y2 (Ukuba i-O4) i-3. I-X indawo idla ngohlobo lwe-divalent cations (Ca, Mg, Fe, Mn) i-2 + kunye ne-Y isayithi ngama-cation alvalent (Al, Fe, Cr) i-3 + kwisikhokelo se-octahedral / i-tetrahedral kunye ne- [SiO4] 4- ehlala kwi-tetrahedra. Iifumba zivame ukufumaneka kwindlela yokukhwela i-dodecahedral, kodwa iqheleke ngokuqhelekileyo kumkhwa we-trapezohedron. (Qaphela: igama elithi "trapezohedron" njengoko lisetyenziswe apha kunye nakwimibhalo yamaminerali emininzi ibhekisela kumfanekiso obizwa ngokuba yi-Deltoidal icositetrahedron kwi-geometry eqinileyo.) Ziye zidibanise kwi-cubic system, zibe neempembelelo ezintathu ezilinganayo nobude obufanayo . Iifumba azibonisi ukucoca, ngoko ke xa ziqhekeka phantsi koxinzelelo, iinqununu ezibukhali ezingenasici zenziwe (conchoidal).
Ngenxa yokuba i-chemical composition of garnet iyahluka, izibophelelo ze-athomu kwezinye iintlobo zinamandla kunezinye. Ngenxa yoko, eli qela lembumbano libonisa uluhlu lobunzima kumlinganiselo we-Mohs malunga ne-6.5 ukuya kwi-7.5. Iintlobo ezinzima ezinjenge-almandine zihlala zisetyenziselwa iinjongo eziqhekezayo.
zithenge iimpawu zamatye zendalo kwisitolo sethu
Rhumela kwincwadana yethu